Kupokana - Nzira Ine Runyararo Kunze | Mutemo Makambani Dubai
Kupokana - Nzira Ine Runyararo Kunze
Kurambidza fomu yeImwe Dispute Resolution (ADR) uye inoitirwa kubatsira mapato kuti agadzirise nyaya iyi pasina kuendesa nyaya yacho kudare.
Sezvo Abstraction inzira ine rugare, inobvumirana, kureva kuti, mapato ese anopinda muchirongwa anofanira kubvuma kuzviita isati nzira yatangwa.
Iyo Abstraction clause inofanirawo kuve iripo kare muchibvumirano. Iyo haigone kuwedzerwa mushure mairi pasina mvumo yevose vanobatanidzwa uye imwe siginecha yesungano, pamashoko akafanana akatsanangurwa pamusoro apa.
Chimiro cheKubvisa chiri pachibvumirano chemuchato, apo zvikamu zviviri izvi zvinobvumirana kuti zvikamu zvipi zvekusarudzika ndezveumwe neumwe. Pazvibvumirano zvekutengeserana, clause iyi inowanzo kuverengerwa muzvibvumirano zvinosanganisira kumhanyisa kana kubhadhara. Kana bato rinobhadhara rikasabhadhara mari yakatarwa munguva, mubatiri wemubhadharo anogona kutora zvinhu zvakarambidzwa uye hapana imwe nhanho yepamutemo inotorwa.
Iro clause reKubvisa humwe imwe yedzakanakisa nzira dzekudzima chibvumirano pasina kukumbira kupindira kwedare uye kushandisa mari pairi.
Nomutsa batana nesu Nyaya dzekupokana